Tenisy – «Tournoi Cap 2020» : nisongadina i Andritoavina | NewsMada
Tenisy – «Tournoi Cap 2020» : nisongadina i Andritoavina
Voahaja ny lojika teo amin’ny «Tournoi Cap 2020», taranja tenisy. Fihaonana notanterahina tetsy amin’ny kianja MSC Ankorondrano, ny 21 – 28 aogositra lasa teo. Andritoavina, teo amin’ny lehilahy ary Iariniaina Tsantaniony kosa ny an’ny vehivavy. Mbola nisongadina indray ny fahaiza-manaon’ireo mpilalao roa ireo, izay tompondakan’i Madagasikara.
Andritoavina nanilika an’i Ando, teo amin’ny famaranana. I Tsantaniony indray nanilika an-dRazafimamonjy Prisca. Nisy ihany koa ny “player’s off”, izay norombahin-dRaoeliariseheno Luc, nandavo an’i Rova Nantenaina. Nahatratra 45 ireo mpandray anjara, tamin’ity lalao ity.
Tafiditra ao anatin’ilay tetikasa Lanja miakatra, ity “tournoi cap 2020” ity, izay novolavolain-dRajaobelina Rija sy Randriantefy Natacha. Tanjona ny hampakatra ny teknikan’ny mpilalao Malagasy ary koa hitazonana ny zava-bitan’ny ekipa Malagasy, tamin’ny “Coupe Davis” sy ny “Fed Cup” farany teo.
Ezahin’ny mpikarakara ny hisian’ny “tournoi” miisa 6 ao anatin’ny taona iray.